ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » ဆုပေးပွဲ » နောက်ဆုံးပေါ် Tourism Hero သည် Senegal အားဂုဏ်ယူစေသည်
အာဖရိကခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့ • ဆုပေးပွဲ • နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • ယဉျကြေးမှု • အစိုးရသတင်းများ • သတင်း • လူပုဂၢဳိလ္မ်ား • ဆီနီဂေါ Breaking News • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • ယခုခေတ်စား • Wtn
ခရီးသွားသူရဲကောင်းများဆုကိုကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ယက်၊ နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၈ နိုင်ငံမှခရီးသွားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကွန်ယက်မှ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ WTN သည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးခရီးကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်မတ်လတွင်ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘာလင်၌စတင်ခဲ့သည်။
ဆုသည်ပရိုမိုးရှင်းအခကြေးငွေပေါ်မမူတည်ပါ။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းအခမဲ့ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ကောင်းကျိုးအတွက်အပိုခြေလှမ်းကိုသွားနေသူများကိုအသိအမှတ်ပြုသင့်သည်၊ ဒေါက်တာ Deme Mouhamed Faouzou သည်၎င်းတို့ထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအနောက်အာဖရိကမှပထမဆုံးခရီးသွားသူရဲကောင်းဖြစ်သည်။
ဆီနီဂေါရှိခရီးသွားလာရေးနှင့်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏အကြံပေး Mr. Deme Mouhamed Faouzou သည်ယခုနောက်ဆုံးပေါ် ခရီးသွားသူရဲကောင်း World Tourism Network မှ
နိုင်ငံတကာခရီးသွားသူရဲကောင်းများခန်းမကိုအမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းဖြင့်သာဖွင့်လှစ်သည် ထူးခြားသောခေါင်းဆောင်မှု၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြခဲ့သူများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်။ ခရီးသွားသူရဲကောင်းများသည်အပိုခြေလှမ်းကိုသွားကြသည်။ တိုင်းကြေးမရှိပါ။
မစ္စတာ Deme Mouhamed Faouzou Namibia ရှိ Josef Kafunda မှ Josef Kafunda မှနောက်ဆုံးခရီးသွားခြင်းသူရဲကောင်းဖြစ်လာရန်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံရသည် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ယက်
သူသည်ဆီနီဂေါတွင်ပထမဆုံးဆုရရှိသူ၊ အာဖရိကတွင် ၉ ကြိမ်၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ၂၅ ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီးယခုနှစ် (၂၀၂၁) တွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ၄ ယောက်မြောက်သူရဲကောင်းဖြစ်သည်။
သူကပြောတယ်၊ ငါစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်၊ ​​ဟုတ်တယ်။
နမီးဘီးယားမှ Mr. Joseph Kafunda ၏အဆိုအရခရီးသွားလုပ်ငန်းသူရဲကောင်းများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုကြင်နာစွာပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
သူ့ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးပြီးငါ့ကိုခရီးသွားခြင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ချီးမြှင့်တာကိုသင် ဦး ဆောင်ခဲ့တဲ့ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောဝံ့သည်၊ ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းနှင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်အားအရာအားလုံးပေးခဲ့သောကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံ၊ အထူးသဖြင့်ဆီနီဂေါနိုင်ငံ၊ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏အာဖရိကခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အနှစ် ၃၀ အတွေ့အကြုံနှင့်ကြိုးစားမှုတို့၏အသီးများဖြစ်သည်။
ဝန်ကြီးများ၊ သံတမန်များနှင့်သံတမန်များ၊ လူတစုရှေ့မှောက်၌တရားဝင်အခမ်းအနားတွင် ၂၀၂၁ Pyne ဆုပေးပွဲကော်မတီမှရွေးချယ်ခံရခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်အားဤဂုဏ်သတင်းကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။
မစ္စတာ Deme Mouhamed Faouzou
ဆီနီဂေါနိုင်ငံ Dakar ရှိခရီးသွားလုပ်ငန်းသူရဲကောင်း
ဆီနီဂေါရှိခရီးသွားလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သက်လျှင် Mr. Deme Mouhamed Faouzou သည်အရေးပါအရာရောက်သည်။
သူသည်အာကာသ၏အကြံပေးဖြစ်သည် ဆီနီဂေါရှိခရီးသွားနှင့်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန.
သူသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဧည့်ဝတ်ပြုမှုနှင့်မြို့ပြလေကြောင်းကဏ္ sector တို့တွင်ကျွမ်းကျင်သည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ and နှင့်အစိုးရစီမံခန့်ခွဲမှုနှစ်ခုလုံး၌သူ၏အတွေ့အကြုံသည်ခေါင်းဆောင်များစွာတွင်ကျွန်ုပ်တို့မတွေ့နိုင်သောအရာဖြစ်သည်
သူသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုအလွန်ဝါသနာပါပြီး၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှတဆင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်မဖွံ့ဖြိုးသေးသောနိုင်ငံများအတွက်တိုက်ခိုက်ရန်အလွန်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိသည်။
သူသည်ရိုသေလေးစားမှု၊ မျှဝေခြင်း၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်ပွင့်လင်းမှုနှင့်ကြွယ်ဝမှုဖန်တီးမှု၏အခြေခံသဘောတရားများကိုကိုယ်စားပြုသောသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
မစ္စတာ Faouzou သည်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ယက်.
Mr. Faouou ကပြောသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဧည့်ဝတ်ပြုမှုနှင့်မြို့ပြလေကြောင်းကဏ္ sector တို့မှဘွဲ့ရထားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်သရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ and နှင့်အစိုးရစီမံခန့်ခွဲမှု၌နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသူ
ငါခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုစိတ်ထက်သန်တယ်၊ သူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုချစ်တယ်၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျကျန်နေသေးတဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကနေတဆင့်ပေါ်ပေါက်လာတာကိုမြင်ချင်တယ်၊ လေးစားမှု၊ ဝေမျှမှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပွင့်လင်းမှုနှင့်ကြွယ်ဝမှုဖန်တီးမှုစတဲ့အခြေခံအချက်တွေကိုဖော်ပြတယ်။ မရ။
ကျွန်ုပ်သည်ဆီနီဂေါရှိခရီးသွားနှင့်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူနည်းပညာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ခရီးသွားအေဂျင်စီဒါရိုက်တာ၊ ဟိုတယ်မန်နေဂျာ၊ စပီကာ၊ သင်တန်းဆရာ၊ အကြီးတန်းအတိုင်ပင်ခံနှင့်ဆီနီဂေါရှိခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအမျိုးသားလေ့လာရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ
ကျွန်ုပ်သည်ပြင်သစ်စကားပြောအာဖရိက၏အာဖရိကခရီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီမှကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဆီနီဂေါ၏ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဆီနီဂေါခရီးသွားလာရေးခရီးများနှင့်စွန့်စားမှုများအပါအ ၀ င်စာအုပ်များစွာကိုရေးသားသူလည်းဖြစ်သည်။
ဆီနီဂေါသမ္မတနိုင်ငံ၏အမျိုးသားအော်ဒါ၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်နို့ကိုငါရခဲ့တယ်။
မစ္စတာ Faouzou သည်ကုမ္ပဏီ၌ရှိသည်။ ဤနေရာ၌ခရီးသွားသူရဲကောင်း ၁၆ ဦး နှင့်တွေ့ဆုံပါ.
WTN ဥက္ကဋ္ဌ Juergen Steinmetz ကပြောကြားခဲ့သည်။
“ အနောက်အာဖရိကမှာပထမဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းသူရဲကောင်းဖြစ်လာဖို့ Deme Mouhamed ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ သူသည်လက်ရှိအကျပ်အတည်းကိုကျော်ဖြတ်နေသောသူ၏ခရီးသွားလာရေးနှင့်ခရီးသွားလာရေးနယ်ပယ်၌သူ၏နိုင်ငံဆီနီဂေါကိုအသိအမှတ်ပြုမှုပေးရန်မမောတမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လူတွေကိုသူ့ရဲ့ ဦး တည်ချက်၊ စွမ်းအင်နဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတွေလိုအပ်တယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်!”
ဒိုင်ယာနာ McIntyre- ပိုက် says:
24:2021 မှာသြဂုတ်လ 07, 26
ကျွန်ုပ်၏ WTN နိုင်ငံတကာခရီးသွားသူရဲကောင်းများဆုချီးမြှင့်သောမိသားစုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ၂၀၂၀ တွင်ငါဂုဏ်ယူပြီးမကြာခင်မင်းနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။